पाँच देशीय टी-ट्वान्टी सिरिज : आयरल्याण्डसँग १३ रनले नेपाल पराजित - VOICE OF NEPAL
पाँच देशीय टी-ट्वान्टी सिरिज : आयरल्याण्डसँग १३ रनले नेपाल पराजित
२२ आश्विन २०७६, बुधबार ११:२९
73 ??? ???????
आयरल्याण्डले दिएको एक सय ४६ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल आयरल्याण्डसँग पराजित भएको छ । ओमानमा जारी पाँच देश सम्मिलित टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट शृंखलाअन्तर्गत बुधबार भएको आफ्नो तस्रो खेलमा नेपाल आयरल्याण्डसँग १३ रनले पराजित भएको हो ।
नेपालका लागि बलिङतर्फ अविनाश बोहोरा र सन्दीप लामिछानेले २/२ विकेट लिएका थिए । साथै करण केसी र ललित राजवंशीले १/१ विकेट लिएका थिए । नेपालका लागि आरिफ शेखले २६, पारस खड्काले २५, इशान पाण्डेले २२, दिपेन्द्रसिंह ऐरीले १९ रन जोडेका थिए । त्यस्तै करण केसीले १६ रन जोडेका थिए, तर जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन ।
यता आयरल्याण्डका लागि बलिङतर्फ आयरल्याण्डका मार्क एडेर र जर्ज डोकरेलले ३/३ लिएका थिए । त्यस्तै ग्यारेथ डिलेनी दुई विकेट लिए । यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको आयरल्यान्डले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १ सय ४५ रन जोडेको थियो ।